1. Malunga namaqebengwana amakhekhe Ngomthendeleko wolonwabo Ibalulekile Kungenxa yokuba ivumba lamaqebengwana azalisa indlu kwaye lidala ubushushu obufudumeleyo ngexesha elizayo. Kodwa izithako kwiikeyiki ezenza ukuba zibemnandi ukutya kwaye zongeze ukutsha zinebhotolo yebhotolo. Endaweni yokuyithenga kwivenkile enkulu okanye kwindawo yokubhaka Isenokungabonakali ikhethekileyo kwaye ufumane incasa eyahlukileyo Namhlanje siza kukuxelela indlela yokwenza ubisi lwebhotolo olulula ukuhombisa amaqebengwana ukwenza uncumo kunye nolonwabo. Yintoni ibhotolo?
2. Makhe sazi ukuba yeyiphi ibhotoloya yokuqala. Zizithako ezihlala zisetyenziswa ekubhakeni nakwiikeyiki. Ikwabizwa ngokuba yimisila yebhotolo Ukuphumla kukwenza ibhotolo cream. Oku kubizwa ngokuba kukuphithizela, kwaye lonke ulwelo lubisi lwebhotolo.Ubume nobume balo bufana nobisi olucekethekileyo. Okanye ubisi olumuncu Ezinye iindawo ezinjengeYurophu Ukusetyenziswa ngokubanzi ekuphekeni Kwaye abanye abantu bayathanda ukuyisela kuba inezibonelelo ezifanayo nobisi, kodwa ayinamafutha. Izixhobo zobisi lwebhotolo • Sebenzisa ikomityi enye yobisi lonke, ubisi olucocekileyo, olungatyibilikanga (2% wamafutha) • iiasidi zendalo ezifana nejusi yelamuni okanye 1 ivumba elimhlophe leviniga. itafile
3. Uyenza njani ibhotolo yamafutha asekhaya Thela icephe eli-1 lejusi yelamuni okanye i-vinaigrette ngekomityi enye yobisi, ngokukhethekileyo ithafa okanye i-2% yobisi olunamanqatha, kodwa ubisi olunamafutha alufanelanga. Kuba sisebenzisa amanqatha ukwenza iimpendulo
4. Hlanganisa izithako kunye kwaye ushiye imizuzu emi-5 ukuya kwe-10, uze ugxobhoze ngokukhawuleza ngecephe lokulinganisa. Kude kube ubisi luqale ukudibana lube ngamaqhuma amancinci. Kude kube iqala ukujiya Iyasebenziseka Uyenza njani ibhotoloyama yasekhaya. Ngamana unganika iziphumo ezingangxami njengalezo zithengwe kwiivenkile ezinkulu. Kodwa kholelwa kucoceko Kunye neencasa zendalo ezihlambulukileyo ezixutywe nenkathalo ukwenza ezona zinto zimnandi zedessert yosapho.
5. Imenyu eyenziwe ngebhotolo yasekhaya Zininzi iimenyu ezisebenzisa ibhotolo yamafutha asekhaya. Thela i-pancake, uyihombise ngesiqhamo kunye nobusi. Emva koko uya kufumana iresiphi ekhethekileyo yepancake eswiti kunye nevumba elinencasa encinci emuncu kunye nenamafutha enokutyiwa nosapho luphela.
6. Okanye uxube kwiitapile ezicujiweyo kwaye uzixhokonxe zibe yinyama enye. Ikhonjwe ngeembambo ezigayiweyo Kuya kuba mnandi ngendlela emangalisayo. Hombisa ilofu entle yekhekhe ngexesha lomnyhadala woNyaka oMtsha. Ngokuqinisekileyo iya kwenza ubungakanani bencasa ukuba ibe yodwa Okubaluleke ngakumbi kukuba, inokwenziwa nosapho lwakho kunye nabantwana, kwaye yenza ibhotolo yebhaskiti eyenzelwa ekhaya inyuse incasa yokutya kwakho. Yenza ngokwakho, chic